» Liverpool oo Isaga Hartay Europa League Iyo Hazard oo Chelsea ka caawiyay inay u gudubto wareega 16ka
Liverpool oo Isaga Hartay Europa League Iyo Hazard oo Chelsea ka caawiyay inay u gudubto wareega 16ka
Feb 22, 2013 - jawaab	Aqrisatay:2341Liverpool ayaa si ciriiri ah uga hartay koobka Europa League inkastoo ay lugta labaad ee wareega 32da ay 3-1 kaga badiyeen Zenit, madaama lugtii hore ee Russia ka dhacday ay Zenit ku soo badisay 2-0.
Zenit ayaana mar kale ciyaartii Anfield ku hormartay goolka oo uu u saxiixay Hulk, ka hor inta uusan Liverpool u barbareyn Luis Suarez oo dhaliyay gool laad xor ah ahaa. Joe Allen ayana dhamaadkii qeybtii hore hogaanka u dheereeyay Reds oo u dhaliyay goolka labaad.
Bilowgii qeybta labaad Luis Suarez ayaa mar kale dhaliyay laad xor fantastik ah taasoo ciyaarta ka dhigtay 3-1, waxaana ay u baahnaayeen gool kale si ay u xaqiijistaan booskooda wareega 16ka ee Europa League.
Inkastoo wadar ahaan ay labada lug ay ku dhamaatay 3-3 hadana Zenit ay ku soo baxday sharciga goolasha martida ah taasoo ka dhigeysa in Liverpool ay macsaalmeysa koobka Europa League.
Dhanka kale gool uu dhaliyay dhamaadkii ciyaarta Eden Hazard ayaa Chelsea ka caawiyay inay u gudubto wareega 16ka ee Europa League ka dib markii ay lugtii labaad ee wareega 32da ay barbaro 1-1 ah ku qabatay kooxda Sparta Prague.
Sparta ayaa goolka ku hormartay, waxaana ay filanayeen in 30 daqiiqo oo dheeri ah la isla aado madaama lugtii hore ay Chelsea ku soo badisay 1-0, laakiin dhamaadkii ciyaarta ayaa gool uu dhaliyay Hazard waxa ay ciyaarta ka dhigtay barbaro sidaasna ay Chelsea u xaqiijisatay booskeeda wareega 16ka madaama wadar ahaan labada lug ay ku badiyeen 2-1.